ပန်ဒိုရာ: Happy New Year 2010!!!
te te tar tr tt dd do do
မနှစ်ကလည်း ကာတွန်းလေးတွေနဲ့ ကြိုတယ်။ ဒီနှစ်ကာတွန်းလေးတွေက နည်းနည်းပိုကြီး လာသလိုပဲ :P
C ноый годом....
Happy new year မပန်...
တော်ပါသေးရဲ့ ဒီတခါ ၂၀၁၀ က အဆွယ်မပါတော့လို့...
Happy new year Ma Pan :)
2010 ကာတွန်းလေး ချစ်စရာ ... ။
နောက်ဆုံးက လျှာထုတ်နေတာ ပန်ဒိုရာများလား ...။
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ ပန်ပန် (ဆုတောင်းရတာလဲ အကြိမ်ကြိမ်ပဲ) ဒီမှာတော့ ခုထိ ၂၀၀၉ ပဲရှိသေးတယ်။ အရင်ရောက်တဲ့ လူတွေကို မနာလိုဘူး။ :)
Wish YouaHappy New Year ... နှစ်သစ်မှာ Inspiration တွေ ပိုရပါစေ... အောက်မှာ မှောက်နေတဲ့ကောင်က မျက်လုံးက ဒီလိုမျိုး @@ ဖြစ်နေရင် ရယ်ရမယ်..
အနုပညာတွေ အများကြီး မွေးထုတ်နိုင်တဲ့ နှစ်ထောင့်တစ်ဆယ် ဖြစ်ပါစေဗျိုး။ ရှင်သန်ခြင်းတွေကိုလည်း တိုးလို့ ဖြန့်ခင်းနိုင်ပါစေ။
(အဲ မှားလို့ )
ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ကြားရ မြင်ရ တွေ့ရသည့်ကိုယ်
happy new year panpan!
Hap Hap Happy Newwwwww Yearrrrrrrr..!!!!!
ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာလို့ ချမ်းသာပါစေ
စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါလို့ လိုအင်တွေ ပြည့်ပါစေ
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်ကစ မဆီမှာ မင်္ဂလာအပေါင်း ခညောင်းပါစေ။
လိုချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝတဲ့ ၂၀၁၀ ဖြစ်ပါစေ ပန်ပန်...
Bamboo Pen နဲ့ ဆွဲထားတာလား...
စကပ်အ၀ါလေး နဲ့ တယောက်လား..ခရမ်းလေး နဲ့ လား..
၀ှစ်ဇ်... ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်... ( မျက်လှည့် တုတ် ချောင်း ပါ မြင်ယောင်ရန်)း)
Happy new year Ma Pan!
၂၀၁၀ ကတော့ပြောရှာပါတယ် ပန်ဒိုရာတို့ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြိုပါ့မယ်တဲ့.
1 Jan 10, 16:07
1 Jan 10, 16:06
1 Jan 10, 13:15
ကျော်ညိုသွေး: လတ်ဆတ်တဲ့ စိတ်ကူးတွေနဲ့ ရှင်သန်ခြင်းအသစ်တွေကို ဖြန့်ခင်းနိုင်ပါစေ မကြီး
1 Jan 10, 11:40
ယောဟန်အောင်: စာများများ ကဗျာများများ ရေးနိုင်တဲ့ ပန်းချီပုံများများ ဆွဲနိုင်တဲ့ နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေဗျာ၊
1 Jan 10, 08:25
tin min htet: မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ .. တောင်းတဲ့ဆု မတောင်းတဲ့ဆု အားလုံးပြည့်ပါစေ ..
1 Jan 10, 03:14
Craton: မွေးနေ့ဖိတ်ပါတယ် တီပန်
1 Jan 10, 01:16
နှင်းနဲ့မာယာ: မပန်ရေ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်...
1 Jan 10, 01:09
ပန်ဒိုရာ: အားလုံးပဲ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ.. မနက်လင်းမှ ကျန်ခဲ့သူတွေကို လည်ပတ်နှုတ်ဆက်ပါဦးမယ်
1 Jan 10, 01:06
သက်ဝေ: ပန်ပန်ရေ... စာလုံးပေါင်း အမှားပြင်လိုက်ပါပြီ... ကျေးဇူးပါး)) ပျော်စရာ နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ...
1 Jan 10, 00:59
မိုးလှိုင်ည: မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ပါ မမပန်...
31 Dec 09, 22:26
ကိုအောင်: နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ဒေါ်ပန်ဒိုရာ
31 Dec 09, 21:35
MDW: နှစ်သစ်ကို အမိန့်ပေးနေတော့ ပန်ဒိုရာ ... မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ ...
31 Dec 09, 16:07
သက်တန့်ချို: လာလည်ပါတယ်အစ်မပန်ဒိုရာ.. ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ....
31 Dec 09, 14:55
မိုးတိမ်: နှစ်သစ်မှာပျော်ရွင်ပါစေ မမပန်
31 Dec 09, 13:18
အိမ့်ချမ်းမြေ့: မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ မပန်ရေ.. (စောသေးသော်လည်း ကွန်ပြူတာရှေ့ရောကက်တုန်း) မနက်ဖြန်ဆို လာနိုင်မှာမဟုတ်လို့ လွမ်း၏
31 Dec 09, 07:53
Nge Naing: Happy New Year! 2009 ကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ။
30 Dec 09, 11:00
နောင်တော်: မပန်.. ၂၀၁၀ ကဗျာကို ဖတ်သွားပါတယ်..။
Nge Naing: မင်္ဂလာပါ။ လာဖတ်သွားပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
30 Dec 09, 02:18
ပန်ပန်က 2010 ကို ချစ်စရာလေးကြိုတာ...
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုတွေနြ့ အရာရာကို အောင်မြင်စွာ ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါစေ...ပန်ဒိုရေ..။
ပျော်ရွှင်ခြင်း အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံခညောင်းတဲ့ မင်္ဂလာနှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေနော်.. စာရေးတဲ့ လက် အင်အားတွေအပြည့်နဲ့ ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ပါစေ
Happy New Year 2010... !!!!
Happy New Year Ma Pan......:D
Happy New Year .. :) Wish you be Healthy, Happy, Wealthy and more money in Year 2010.